Waa Kee Ninka Ugu Taajirsan Qaarada Africa? Dalkeesa U Dhashay? | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Waa Kee Ninka Ugu Taajirsan Qaarada Africa? Dalkeesa U Dhashay?
Waa Kee Ninka Ugu Taajirsan Qaarada Africa? Dalkeesa U Dhashay?
Waxaa Qoray: Abdishakur Geesey /////////// Taariikh: 4-10-16 8:44 PM Ma’ahan wax sahlan in qof uu noqdo maalqabeen ama taajir, waa wax uu baahan dadaal iyo waqti badan, dhib badan loo maraayo si u gaarto qofka darajada maalqabeenimo ah. Laakiin is weydii Waa Kee Ninka Ugu Taajirsan Qaarada Africa? Hantida uu heysto intee la egaatahay ? Dalkeesa U Dhashay?
Aliko Dangote, Oo ah Madaxweynaha Shirkada Dangote Group
Aliko Dangote Net Worth 2016 – $15.1 Billion
Aliko Dangote GCON, waa maalqabeen Nigerian ah, waxaa u ku dhashay Gobolka Waqooyi Galbeed Dalka Nigeria Ee Kano State, waxay uu dhashay 10 april 1957dii, Waxbarshadiisa heer jaamacadeed waxa uu ku so qaatay dalka masar waxaa uu bartay Ganacsiga ama Business Studies, isagoo ka so baxay jamacada Al-Azhar University.
Sido kale Aliko oo ah ninka Africa ugu taajirsan waa 59jir, waxaa uu leeyahay shirkada ugu weyn galbeedka qaarada Africa Ee magaceda layiraahdo Dangote Group, waxaa la aas aasay 1981dii. Waxa ka shaqeeyo in ka badan 26,000 oo shaqaalo ah.
Waxyaabaha ay so saaran Companygan caanka ah waxa kamdi ah shamiitada, Sakorta, Cusbada, Burka, biraha, saliida iyo gaas iyo qabalka farsamooyinka gacanta. Sido kale adeegyada ay bixiso waxaa ka mid ah qaadidka badeecoyinka “Logistics” iyo iibinta guryaha “Real Estate”.
Dangote Group, xarunta ugu weyn waxay ku taal magaalada lagos ee dalka Nigeria, sido kale waxay xaruma ku leedahay wadamada kuyaal qaarada Africa sida Ethiopia, Senegal, Cameroon, Ghana, South Africa, Togo, Tanzania iyo Zambia. lacagta uu leeyahay US$15.1 bilyan oo dolar.
Dhinaca kale Majalada layiraahdo Forbes magazine, oo inta badan ka Faalooto arimaha la xariiro Ganacsiga, waxay daabacday in Mr Dangote in uu noqday qofka kowaad 5o qof Ee qaarada Africa ugu qanisan,
Ugu danbeyntiina, Aliko Dangote sandkii 2016ka, waxaa uu ka so muuqday liiska kala sareynta maalqabeenada aduunka kaalinta 51, isgoo dhaafay maalqabeeno udhashay dalka mareykanka sidaasi waxaa uu ku noqoday ninka ugu taajirsan qaarada Africa.